फुल टिप्न खोज्दा यसरी गएको रहेछ पाइलटको ज्या न ! फेरी किन फर्कीएका थिए फुलको बोटमा - Onlines Time
फुल टिप्न खोज्दा यसरी गएको रहेछ पाइलटको ज्या न ! फेरी किन फर्कीएका थिए फुलको बोटमा
फरक राजनीतिक आस्था भएकै कारण कति विभेद सहनुपर्छ भन्ने उदाहरण मुगुमा देखिएको छ। स्थानीयले बहुमत र अल्पमतको आधारमा भौतिक पूर्वाधार बनाउन थालेका छन्।
Prevमहान श्रीमान बिनोदकी श्रीमतीको पछील्लो अवस्था यस्तो, बोल्न सक्ने भइन ! कहिले फर्किदैछन घर ? (स्वास्थ्य लाभको कामना)
Nextहेर्नुस भर्खरै 6बर्षे बा ’लिका मा’ र्ने ब्यक्ति नै पहिलो चोटी मुख खोल्य- खोजेको भिडियो